प्रधानमन्त्री ओली ज्यु ! के तपाइको सरकार ‘अलच्छिन’ भएरै विमान दुर्घटना भएको हो ? – My Blog
Home लेख रचना प्रधानमन्त्री ओली ज्यु ! के तपाइको सरकार ‘अलच्छिन’ भएरै विमान दुर्घटना भएको हो ?
प्रधानमन्त्री ओली ज्यु ! के तपाइको सरकार ‘अलच्छिन’ भएरै विमान दुर्घटना भएको हो ?
starnews - Mar 14, 20180021
समय २०७३ फागुनको अन्तिम ताका थियो, अर्थात ठिक एकबर्ष पहिले । आजका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एउटा भनाइ यस्तो थियो ‘अलच्छिन सरकार ! गाडी नपल्टिएको दिनै छैन’ जुनबेला ९ महिने एमाले सरकारको कार्यकालबाट केपी ओलीलाई गलहत्याएर काँग्रेसको साथ लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
सत्ताबाट गलहत्याइएका ओलीलाई यति पिर पर्यो कि… उनिले सत्तामा बसेकाहरुलाई शेषनाग झैँ विषवमन गर्दै हिड्न थाले । प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारको बिरुद्द विषवमन गर्नकै लागि केपी ओलीले मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान बन्यो ।
ओलीले विपनामा त अभियान मार्फत प्रचन्डलाई सरापे, सायद सपनामा पनि बर्बराउदै सरापे । मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियान लिएर देश दौडाहमा रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड सरकारको खोइरो त खने नै, मधेसी मोर्चाको पनि खुबै खोइरो खनेका थिए । किन भने एमालेले उछिट्याएर पाखा लगाएको मधेसी मोर्चा प्रचण्ड सरकारमा सामेल थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको बिरोधको ढाँचाले यस्तो हद नाघ्यो कि, देशमा हुने सवारी दुर्घटना पनि प्रचण्ड सरकार ‘अलच्छिनी’ भएकोले दुर्घटना भएको भन्दै बिरोध गरे । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रचण्डको सरकार ‘अलिच्छिनी’ भएकोले, यो सरकार बनेदेखि नै गाडी दुर्घटना भएको भन्दै ओलीले आमसभाहरुमा कुर्लन्थे ।’
ओलीले आफ्ना उखान टुक्काका धारिला बाण प्रहार गर्दै मञ्चमा भाषण गर्थे ‘विकास प्रेमी, नेपाली जनताले मन पराएको लच्छिनी सरकारलाई हटाएर, यो अलच्छिनी सरकार बनेदेखि गाडी नपल्टिएको दिन नै छैन, उम्दै उलच्छिनी सरकार ’ । यो उनको भाषण हो ।
ओलीका लागि त्यो ९ महिने सरकार अब अन्तिम पटक भएको जस्तै पिडा बोकेर खुबै रिस पोख्थे । लाग्थ्यो उनको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भविष्यको अब अन्त्य भएको छ, अब उप्रान्त कहिलै प्रधानमन्त्री हुन पाउने छैनन् ।
उनले मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा यस्तो सम्मको भाषण गरे ‘भत्ता लिने, गाडी चड्ने अनि यहि संबिधान नमानेर, संसोधन गर्छु भन्ने । नकचरोको पनि हद हुन्छ नि ?’
उ बेला सत्तामा बहालवालाहरुलाई ‘नकचरो’ सम्म भन्न भ्याए । आज ओली ज्युका आगो ओकल्ने आरिसे बर्षहरु पार गरेर ओली ज्युको पुनः दिन घुमेर आएको छ ।
आज इतिहासकै ठुलो सत्ताको मालिक बनेर कुर्सिमा उक्लिएका छन् । मानौ उनको लच्छिनको सरकार समस्या रहित फिरेर आएको छ, सरकारमा बेकामे भत्तावाला गाडीचढीहरु नकचरोहरु उनको सत्तामा छैनन ।
तर जसरि ओलीले हिजोको सत्ताको बिरुद्द विषवमन गर्दै आए, त्यो भन्दा भयानक स्थितिमा ओली सरकार उभिएको छ । अर्थात भयानक दुर्घटनाका बिचमा प्रधानमन्त्री केपी ओली उभिएका छन् ।
पर्साकी ८ बर्षिया बलात्कृत बालिकाको विभत्स घाउ देखि कैलाली घोडाघोडीको बोक्सी काण्ड यो सरकारको पालामा इतिहासकै कलंकित घटनाको रुपमा दर्ज भएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस बंगला बिमानको दुर्घटना नेपालको इतिहासकै सबै भन्दा ठुलो दुर्घटना हो ।
ओलीले हिजो यहि सत्ताका बिरुद्द विषवमन गरेका उखान टुक्काहरूको हिसाव किताव एक-एक चुक्ता गर्ने बेला आएको छ । अर्थात अब प्रतिक्षाको घडी हराएको छ र ओली ज्युले मुल्यवान समयको परिणाम पस्किने बेला आएको छ ।
नत्र अरुलाई सरापेका सरापहरु सर्लक्कै आफूतिर फर्किने छन् र ठाउँको ठाउँमै राजनीतिक अपुताली हुनुपर्ने छ ।अनि इतिहासले आफैलाई नै नष्ट गर्नेछ ।
आज यति ठुलो बिमान दुर्घटना किन भयो ? यसको उत्तर केपी ओलीका हिजोकै प्रश्नहरुले खोजिरहेका छन । युएस बंगला बिमान तपाईको सरकार लच्छिनी भएर हो वा अलच्छिनी भएर दुर्घटना भयो, ओली ज्यु ?
के हिजो केपी ओलीले झैँ सत्ताको आरिस बोकेर, आजका प्रतिपक्षदलहरुले जहाज दुर्घटनालाई केपी ओलीको अलच्छिनी सरकारका कारण दुर्घटना भयो भनेर भन्न मिल्ला ?
आरिसले आरोप लगाएर कदापि मिल्दैन, तर सत्ताको सिनो बिना बाँच्नै नसक्ने र सत्तामा पुगेपछि सिन्को पनि नभाँच्ने राजनेताको नैतिकता हराए पछि, यो अभिव्यक्ति पक्कै आउनेछ । पोष्टपाटी अनलाईनबाट साभार
Previous Postबंगलादेशको विमान दुर्घटनापछि, नेपालबिरोधी गतिबिधिमा खुलेयाम लागे माओवादी नेता बर्षमान पुन : माओवादीभित्र मच्चियो खैलाबैला
Next Postनयाँ रहस्य : यस्तो थियो पाइलटको शारीरिक र मानसिक अवस्था